China Weekly: ေဆး၀ါးမ်ား၊ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကားမ်ား - Pandaily
China Weekly: ေဆး၀ါးမ်ား၊ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကားမ်ား
Aug 23, 2021, 19:59ညနေ 2021/08/23 20:01:15 Pandaily
ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈ သတင္းမ်ား ဆေးသုတေသနကုမဏီ XtalPi က ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ တန်ဖိုးအထိ မြှင့်တင်ပြီး မတန်တဆ အသစ်ရောက်ရှိအောင်၊ နာမည်ကျော် လေဆာရေဒါကုမ္ပဏီ Innovusion က ဒေါ်လာ ၆၆ သန်း အကုန်အကျခံကာ B wheel finance၊ Semons Southchip New Southchip က ဒေါ်လာ သန်း ၄၆၀၀ ရရှိပြီး အသစ်ထပ်မံရရှိခဲ့သလို အလိုအလျောက်မောင်းနှင်တာတွေကို QCraft ရဲ့ ထောက်ပံ့မှု ရရှိခဲ့ကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်ပုံငွေရယူခဲ့ပါတယ်။
မူးယစ်သုတေသနကုမ္ပဏီXtalpi လစာတိုး၄သန္း ၄၀၀
XtalPi ကုမၸဏီသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ ရရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲထုတ္ကုန္မ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသိဥာဏ္ရည္တုကို အသံုးျပဳကာ အလားအလာအရွိဆံုး ေဆးေပါင္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္သစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အမေရိကန်အခြေစိုက် တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်တာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ငွေကြေးဒေါ်လာ ၃၁၈၈ သန်းနဲ့ nbsp ;လအနည်းငယ်အကြာမှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ရရွိခဲ့တဲ့ ႀကီးမားလွတဲ့ ဘ႑ာေငြဟာ သူ႔ရဲ႕ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးျဖစ္တဲ့ သန္း ၂၀ ေလာက္ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။
DealStreetAsia ၏ အစီရင္ခံစာအရ D-Wheel သည္ OrbiMed Healthcare မွ ဦးေဆာင္ျပီး Management and Management ႏွင့္ Parko Investment တို႔ ပူးေပါင္းထားသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဦးေဆာင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံခဲ့သည့္ အဓိကရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ သံုးဦးအပါအဝင္ Soft Silver Viion Fund2, Persons Capital and Daying Venture (Morningsiventure Capital) ကုမၸဏီတို႔ ပါဝင္သည္။
ယခုအသစ္ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေငြအမ်ားစုကို Xtalpi က ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အလားအလာရွိေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ ကြန္ေပါင္းဓာတ္မ်ားဖန္တီးၿပီးေနာက္ ယင္းျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ခန္႔မွန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။
လွန်ခဲ့သောနှစ်က C wheel test ကို လိုက်လံစစ်ဆေးပြီးနောက် Xtalပီး မှ စတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကာ ထိုအချက်သည် ကမ္ဘာ့စစ်စစ် ဓါတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစည်းပြီး ၎င်း၏ ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ အလားအလာရှိသော “Digital tal” မော်ဒယ်သစ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဇီဝဆေးဝါးသုတေသန ပညာရှင်များက စမ်းသပ်မှု မစတင်မီ ဆေး၏ ထိရောက်မှုကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သိရှိနားလည်စေခဲ့သည်။
အေၾကာင္းစံုကို · ကုလားပဲလံုး
XTALPI သည်ဆေးဟာ ကွမ်တမ်အခြေစိုက် ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ ဉာဏ်ရည်တုသုတေသနလုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး သည်ဆေးဟာ သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကနေ တစ်ဆင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တက်တာ၊ အရွယ်အစား၊ အသစ်အဆန်းတွေပြောင်းလဲလာပြီး အောင်မြင်မှုနှုန်းတွေပြည့်ပြည့်ဝဝ ပြောင်းလဲလာပြီး ဆေးဝါးတွေကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကုမဏီရဲ့ Flagship Smart Digital Drug နဲ့ Development Platform ကို ID4, Artificial Intelligence နဲ့ Cloud data တွေကို အခြေခံပြီးစုဆောင်းအသုံးပြုထားပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှု နည်းပညာနဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ nbsp ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ေမာ္လီက်ဴးေလးမ်ားက ဓာတ္မ်ားသည္။
ေလဆာေရဒါျဖင့္ စတင္ျခင္းတီထွင်ဆန်းသစ်မှု B wheel 66 သန်းရပြီ
Laser Intelligence System ကို တီထွင်တာတွေဖြစ်ပြီး၊ Lidar Innovusion Holdings Co.Ltd. သည် ထိုင်းနိုင်ငံ Chun An International Holdings Limited နှင့် Xiaomi Support တို့က ဦးဆောင်မဲဆွယ် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Capital B wheelplus ရန္ပံုေငြ သိန္း ၆၆၀၀ ေက်ာ္ တင္တယ္။ ကုမဏီရဲ့ နည်းပညာကို အလိုအလျောက်မောင်းနှင်တဲ့ ကားတွေနဲ့ လာမယ့်နှစ်မှာ တိုးမြှင့်ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ကားထုတ်လုပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
စီအီးအိုျဖစ္သူ Boyu Wai က ယခုအသစ္ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေငြေၾကးသည္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Ma Tin International, NIO Capital, October Venture Company နဲ့ F-Prime Capital တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ . သည်ကုမဏီရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆီလီကွန်တောင်ကြားနဲ့ တရုတ်ပြည် Suzhou မြို့တွေမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Innovusion Laser Radar System ကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကိုယ်တိုင် နေရာယူထားကြပြီး အဝေးထိန်းစနစ်အဖြစ် ပုံသဏ္ဌာန်ရေးဆွဲကာ အနာဂတ်တွင် Mobile Solutions Empowerment ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် semiconer ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းဖြင့် Dwheel Finance ရရှိFinancial
Southchip Technologies (Shanghai) Co., Ltd. ၏ D-wheel Finance ကို ယွမ် သန်း ၃၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းခန့်) ရရှိထားသည်။
အသစ္ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားဆံုးမွာ Gwang China Partners ႏွင့္ Smartphone ကုမၸဏီႀကီး Vivo တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျဖစ္သည္။ လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင်တွေထဲမှာ မဟော်ဂနီ တရုတ်နဲ့ ငွေသားအရင်းအနှီးရှိတဲ့ ရှယ်ယာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ေစ်းကြက္ေ၀စုအတြက္ သံုးစြဲမႈဧရိယာကို အီလက္ထရြန္နစ္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ပီေကာ္မရွင္၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးသည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သန္း ၁၀၀၀ (ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ခန္႔)အထိ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စု၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သိမ္းပိုက္ထားသည္။
Southchip နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သည်ကုမဏီဟာ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ Texas တူရိယာကုမဏီက အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းကစပြီး လီသီယမ် ဓာတ်ခဲ၊ ဗို့အား၊ ဓာတ်ခဲနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အလျင်အမြန်အားသွင်းဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ သည်ကုမဏီရဲ့ ဖောက်သည်တွေကတော့ Xiaomi , Oppo, Lenovo, Samsung နဲ့ Drone တို့ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်မစ်ရှင်က အလိုအလျောက်မောင်းနှင်တာတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ QCraft‘‘သိန်း ၁၀၀ တန် သစ်များ
တရုတ်လူမျိုးတွေက ဧရာမအမေရိကန်မစ်ရှင်အဖွဲ့ (Meituan ) ကို အလိုအလျောက်မောင်းနှင်ရင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေကို QCraft က ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ အကုန်အကျခံကာ အသစ်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တရုတ်နည်းပညာကုမဏီကြီးတွေရဲ့ အလားအလာကို မီးမောင်းသူမဲ့ကားတွေမှာ ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
QCraft က တနင်္လာနေ့မှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ A+ Wheel Financing ကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး YF Capital နဲ့ Updal Capital တို့က မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ကြသလို အမေရိကန်အခြေစိုက် Longzza Capital နဲ့ ရှိပြီးသား IDG Capital တို့လည်း မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာ Outlet LatePost ဒါကို QCraft ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေထဲက “လွတ်လပ်တဲ့ ကျီးကန်း” ကလပ်ရဲ့ ခြေရာခံ၊ လွတ်လပ်တဲ့ ထောင့် တိရစ္ဆာန်ကလပ်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အနည်းဆုံး သိန်း ၁၀ဝ လောက် ရှိတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
QCraft စီအီးအိုႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္သူ Woo က တနလၤာေန႔တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေငြကို သံုးစြဲမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘီးခြန္အား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ Smart City ဟု အမည္ေပးထားသည့္ မိုဘိုင္းျပကြက္ကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း အပါအဝင္ နဂါးလှေတစီးက နေရာလွတ်မှာ ပြေးဆွဲပါတယ်။
QCraft သည္ လက္ရွိတြင္ Suzhen ျပည္နယ္၊ Shenzhen ႏွင့္ Buhan တို႔တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Long Island-One ကားလမ္းမေပၚတြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္စီးကားငယ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနသည္။ အဆိုပါ မီနီဘတ်စ်မှာ ကမ္ဘာ့တည်နေရာပြစနစ်တပ်ဆင်ထားပြီး ကင်မရာလေးလုံး၊ လေဆာဆင်ဆာနှစ်ခုနဲ့ ရေဒါဆင်ဆာငါးလုံးပါရှိတဲ့အတွက် လမ်းကြောင်းပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့ ကင်မရာတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ထောက်လှမ်းနိုင်စေဖို့နဲ့ ယာဉ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ အပါအဝင် အတားအဆီးတွေကို ရှောင်ကွင်းနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
March Bloomberg လူမႈမီဒီယာဘီလူးႀကီး ဘိုက္ဝန္းက Qcraft ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာေတြကို ေငြေၾကး ၂၅ သန္းထက္မနည္း ျမႇင့္တင္ခဲ့တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို ကိုးကားၿပီး သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
ဆီလီကွန်တောင်ကြားအခြေစိုက် QCraft ကို ဖန်တီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသော Tesla Waybo နှင့် Uniqlo ကုမ္ပဏီတို့မှ အမှုဆောင်အရာရှိများက လေးလသာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ အများပြည်သူသုံး လမ်းများကို စမ်းသပ်ဖောက်လုပ်ခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ကုမ္မဏီတွေအနေနဲ့ တရုတ်ကို အဓိကထားပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၊ ဘေဂျင်း၊ Suzhen နဲ့ Shenzhen တို့မှာ ရုံးခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က Windsons သတင္းမွာေတာ့ မူးယစ္သုေတသနကုမၸဏီ Xtali Pi က ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သစ္ေတြေရာက္ေအာင္ မတန္တဆ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ နာမည္ေက်ာ္ ေလဆာေရဒါကုမၸဏီ Innovusion က ၆၆ ဒသမ B Wheel နဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။